Wararka - Shirkadeena ayaa ku guuleysatay shahaado patent model mucaawinada aaladda korantada oo aad u deggan
Shirkadeena ayaa ku guuleysatay shahaado shatiga patent-ka nooca utility-ka ee loogu talagalay aaladda koronto-dhaliyaha taagan
Shirkadeena ayaa si rasmi ah u heshay shahaado patenti nooca mashiinka wax soosaarka ee matoor sare oo aamusnaan ah oo la dejiyay 9-kii Maarso, 2016. Qalabka koronto-dhaliyaha ah ee aamusan ayaa dib u habeyn ku sameynaya qaab dhismeedka gudaha ee koronto-dhaliye si cutubku u qabsado meel yar. Waxay ku habboon tahay dukaamada yaryar ama meelaha la deggan yahay ee leh boos kooban.
Muuqaalka noocan ah koronto-dhaliye ayaa ah nashqadeena gaarka ah.
Qalabkan koronto-dhaliyaha ah ee toosan aamusnaan kuma koobna oo keliya meel yar, laakiin sidoo kale wuxuu u dhaqaajin karaa unugga sida uu doono ka dib marka lagu daro giraangir dhaqaaq ah Markuu dukaanka yar u furan yahay meherad, qalabka koronto dhaliyaha ayaa laga rari karaa dukaanka oo la dhigi karaa albaabka, si aysan saameyn ugu yeelan macaamiisha ku adeegata dukaanka. Markuu dukaanku xirmo, shaqaalaha dib ugu celi dukaanka. Waa xulasho aad u wanaagsan in la keydiyo booska dukaamada lana hubiyo nabadgelyada iyo xasiloonida korantada ee cutubka.
Faa'iidooyinka kale ee genset kansarka sida soo socota:
(1) Faa'iidada dhejinta: Isku-xidhka isku-xidhka bannaanka ee af-hayeenka ma guurtada ah wuxuu ka samaysan yahay bir bir ah oo birta ka samaysan oo 304 ah, taas oo si weyn u hagaajisa wax soo saarka xaaladaha aadka u adag ee Diidmada u nugul isticmaalka deegaanka, badeecaddu waxay sii ahaan doontaa mid cusub sannado badan oo la isticmaalay ka dib.
(2) Faa'iidooyinka albaabka iyo daaqadda lagu shaabadeeyo: iyadoo la isticmaalayo birta kaarboonka ah ee shanta bilaa tolmoon, cajalad lagu dhegsado oo laastik ah oo sarreeya, daboolida farqiga ayaa ka wanaagsan
(3) Faa'iidada iska caabinta Cimilada: Afayeenka ma guurtada ah wuxuu qaataa qufulka albaabka birta waxqabadka sare leh, kaas oo aad ugu habboon in la furo lana hagaajiyo caabbinta cimilada ee mashiinka oo dhan.
(4) Faa'iidada xoogga sanduuqa: Qaybaha ugu muhiimsan ee ku hadla af-hayeenku waxay qaataan heerka caadiga ah ee heer qaran ee qabow ee birta duudduuban oo dhinta caaryada, taas oo si weyn u wanaajinaysa wax soo saarka guud ahaan xoogga iyo nolosha adeegga.
(5) Faa'iidada muuqaalka: Gaarigu waa mid jilicsan oo si habeysan loo qaabeeyey, qurux iyo qurux badan, lehna heer sare oo difaac ah maadooyinka imtixaanka.
Waqtiga dhejinta: Mar-09-2016